Minecraft ModCombo Apk Dhawunirodha Ye Android [Game] - Luso Gamer
Minecraft inoverengerwa pakati pemitambo yakanyanya kutamba online pasirese. Mutambo uyu unotambwa nevatambi kwenguva refu uye zvakadaro vazhinji vanotanga vanonzvenga kuutamba nekuda kwekunyoreswa. Zvisinei nhasi pano tadzoka neMinecraft ModCombo.
Chaizvoizvo, mutambo watiri kutsigira pano wakagadziridzwa kana nemamwe mazwi, unogona kunzi wakagadziridzwa. Chinangwa chekuratidza iyi mod gameplay ndechekupa modded yakavanzika server. Uko zvirambidzo zvese kusanganisira zvipingaidzo zvinobviswa.
Uyezve, maitiro ekuisa gameplay akasiyana chaizvo. Uye pazasi pano tinotsanangura ese aya matanho akakosha muchidimbu. Saka iwe unofarira uye wakagadzirira kuve tenzi weMinecraft. Wobva wadhawunirodha Mod Mutambo kubva pano nekudzvanya kumwe chete.
Chii chinonzi Minecraft ModCombo Apk
Minecraft ModCombo Android ndeye online modded mutambo wekushandisa. Iko kurambidzwa kwekutanga kunosanganisira zvipingamupinyi zvinobviswa zvachose. Kunze kwekupa yakavanzika server, mukati memutambo chikafu chinochengetwawo chisina muganhu.
Kana tikatarisa mune yakananga madhata emutambo wemutambo saka takawana Minecraft ichitariswa pakati pemitambo inotambwa yeArcade. Kunyangwe iyo yakadzikwa zvakananga muchikamu cheprimiyamu. Zvinoreva kuti kunze kwekunge vatambi vatenga rezinesi rekutanga.
Vashandisi veAndroid havagone kunakidzwa nekutamba. Kunze kwekubhadhara imwe-nguva mubhadharo, zvakare inomanikidza vatambi kuti vatenge akawanda zvimwe zvinhu zvepro pavanenge vachitamba. Kunyanya izvo zvinhu zvepro zvinogona kuiswa pakati pezvimwe zviwanikwa zveprimiyamu.
Mushure mekuverenga zvese izvi zvirambidzo uye zvikumbiro zvevatambi. Vagadziri vanobudirira mukupa modded gameplay inopa zvisingaperi mikana. Kana iwe wagadzirira kutamba iyo Minecraft Mod mutambo neshamwari wobva waidhawunirodha.
zita Minecraft ModCombo
zera 82.87 MB
Package Zita com.mojang.minecraftpe.mod
chikamu Games - Arcade
Tichiri kuongorora iyo mod mutambo takawana akawanda akasiyana ma pro maficha mukati. Izvi zvinosanganisira Maganda, Magamba, Simba, Zvombo, Mepu nezvimwe. Rangarira akawanda modes aripowo kusarudza uye kutamba mukati.
Parizvino, iyo mod mutambo unobatwa pamusoro peyakavanzika server. Izvi zvinoreva kuti vatambi vanogona kunakidzwa nekutamba kwakatsetseka vasinganetseki nekurambidzwa kana kunyorwa. Ruzhinji rwevatambi vanofarira kupfuura zvinorambidzwa vanogona kutya.
Chikonzero chekutya imhaka yekurambidzwa zvachose maakaundi nemidziyo. Zvisinei panguva ino, matambudziko ose aya anogadziriswa zvachose. Zvakadaro isu hatina chokwadi nezve maoperation asi isu tinogona kuvimbisa iyo yakatsetseka kushanda kweiyo premium zviwanikwa.
Rangarira maitiro ekumisikidza uye mashandisirwo emutambo modded ari nyore. Chekutanga vatambi vanokumbirwa kurodha yazvino vhezheni yemod Apk kubva pano. Kana kurodha pasi kweApk kwapera.
Zvino tanga iyo yekuisa maitiro eMinecraft Mod Combo Dhawunirodha. Nekudzvanya pane yakatorwa Apk faira kubva panhare yekuchengetedza chikamu. Isu tinotenda kuisa iyo yakagadziridzwa vhezheni inozadzisa zviroto zvekupfuura zvinogoneka.
Kubatanidza iyo yemitambo app kunopa kusingaperi mikana.
Izvi zvinosanganisira Maganda, Mepu, Magamba, Zvombo nezvimwe.
Ultimate Hero masimba aripowo kusarudza.
Iyo yemutambo interface yakafanana neyekutanga.
Maitiro ekurodha Minecraft ModCombo Apk
Iyo yepamutemo vhezheni yekutamba application inowanikwa kuti uwane kubva kuPlay Store. Nekudaro, vatambi vangangoda kutenga rezinesi kutanga. Asi iyo mod gameplay yatiri kutaura nezvayo pano haisvikike kuwana kubva Play Store.
Kunyangwe wechitatu-bato mawebhusaiti anoti anopa akafanana mafaera emitambo. Vari kupa chaizvo fake uye akashatiswa mafaira. Saka chii chinofanira kuitwa nevashandisi veAndroid mumamiriro ezvinhu akadaro? Tichifunga nezvechikumbiro chevashandisi veandroid pano pawebhusaiti yedu isu tinopawo iyo inoshanda vhezheni yemod game.
Iyo modded Apk faira yatiri kuratidza pano haina kumbove yedu. Kunyangwe isu tinozivisa kuti webhusaiti yedu haimbove ine kodzero dzeakapihwa maApk mafaera. Kunyangwe isu takaisa iyo mod mutambo uye hatina kuwana dambudziko. Asi gadza uye unakirwe neshanduro yakagadziridzwa panjodzi yako wega.
Yakawanda yemitambo yakasiyana modded yakagovaniswa pano pawebhusaiti yedu. Avo vanofarira kunakidzwa nemimwe mitambo yakagadziridzwa vanofanira kutevera maURL'. Zviri Minecraft Java Edition Apk uye Terra Mods YeMinecraft PE Apk.
Saka wakazviona sewe fan hombe yeMinecraft gameplay. Asi gara uchiyemura kunakidzwa nezviwanikwa zvepro mukati uye uende kupfuura zvinogoneka. Asi kutadza kuita izvozvo nekuda kwezvirambidzo zvakakosha. Wobva waisa yazvino vhezheni yeMinecraft ModCombo Dhawunirodha.
Categories Arcade, Games Tags Minecraft Mod Combo Download, Minecraft ModCombo, Minecraft ModCombo Android, Minecraft ModCombo Apk, Mod Mutambo Post navigation